Yini Okudlulisayo? | Martech Zone
NgoLwesithathu, Okthoba 24, 2007 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Izolo ngidle isidlo sasemini nomngani wami omuhle, uBill. Njengoba besidla isobho lethu elimnandi le-chicken tortilla ku Indawo yokuphekela utshwala yaseScotty, Mina noBill sixoxe ngaleso sikhathi esinzima lapho ukwehluleka kushintsha kube yimpumelelo. Ngicabanga ukuthi abantu abanethalente ngempela bayakwazi ukubona ngeso lengqondo ubungozi futhi bazuze futhi benze ngokufanele. Agxumela ethubeni, noma ngabe ingozi ayinakunqotshwa… futhi kuvame ukuholela empumelelweni yabo.
Uma ngilahlekelwa nguwe, hlala nami. Nasi isibonelo….
Inkampani A Kwakha uhlelo lokusebenza olulula olusebenzayo, kepha alunazo zonke izici ezidingekayo kusikhathi sokuqala. Lapho kuvela ithuba lokuya phambili ngqo emncintiswaneni, iNkampani A ibeka okulindelwe futhi inqume umugqa wesikhathi onolaka wokwakha izici ezisele ezidingekayo ukuqedela inkontileka. Okwamanje, ngaphandle kwesixazululo, bagxumela ezingxoxweni bese bethengisa.
Inkampani B ubona ithuba, kepha uyazi ukuthi alikwazi ukuhlangabezana nezidingo zesicelo sesicelo, ngakho-ke bakhothama ngomusa futhi baqhubekele phambili ngokuqinile kuhlelo lwabo lokupheleliswa kanye nokubusa komhlaba.
Iyiphi inkampani eqinisile? Inkampani A ithatha izingozi ezinkulu ngenkontileka kanye neklayenti. Babeka idumela labo engcupheni futhi embonini. Eqinisweni, mhlawumbe kunethuba elihle lokuthi bazokwenza umsebenzi omningi wenziwe kepha hhayi wonke. Inkampani B ayikaze ngisho ifike etafuleni, futhi iqiniso lokuthi bengatholanga inkontileka kungababeka ngaphansi ngaphambi kokuba iNkampani A iqede.
Esikhathini esedlule, unjiniyela owayedla ngoludala kimi wayeyobe ebhuquzela kuNkampani A futhi ngangingeke ngibahloniphe ngokubathembisa ngokweqile nangokwenza okuncane. Kepha izikhathi sezishintshile, akunjalo? Njengabathengi bezinkampani, sivame ukuxolela izinkampani ezingakwazi ukwenza isikhathi esinqunyiwe noma ukuqhamuka nezimpawu ezifushane. Senza ngalokho esinakho.
IMHO, Inkampani B ayimeli thuba kulezi zinsuku. Ngiqala ukukholelwa ukuthi ikhono lokungena ekuthengisweni kusenesikhathi futhi ngikwazi ukuguquguquka kokukhiphayo yilokho okuzokwenza uphumelele. Uma kunethuba lokuthi uphumelele, kucishe kufanele uzame njalo. Ngaphandle kwalokho, ithuba lizokudlula.
Lokhu kuyiqiniso ngemisebenzi, lokhu kuyiqiniso ngezinkontileka, futhi kuyiqiniso ngokumaketha. Uma ulinda ukuklama umkhankaso ophelele, awusoze waba nethuba lokuwethula. Lapho is umkhawulo ofanele phakathi kokuphelela nejubane. Uma ungaletha okuncane, kepha ukuletha kaningi, uzothatha ibhizinisi.
Ukube bengizokwenza ukuqhathanisa, bekufanele ngithathe okusobala, i-Apple kuqhathaniswa neMicrosoft. IVista ibe yiminyaka emikhulu yokukhishwa ekulindeni. Ngakolunye uhlangothi, ingwe (ebengiyi-ode ngaphambili izolo) kubukeka kungukuthuthuka okunothe okukhulu kwe-OSX. IMicrosoft yethula iXBox 360, isistimu yokudlala yemultimedia egcwele ngazo zonke izinsimbi namakhwela. IMicrosoft yethula iZune, isidlali semidiya esihle kakhulu, esihlolwe kakhulu esingaklwebheki kangako emakethe. Okwamanje, i-Apple yethula i-iPod, i-iPod Shuffle, i-iPod Nano, i-iPod Nano, i-Mac Mini, i-Cinema Displays, i-Appletv, i-iPhone, ama-iPod anemibala, i-iPod Touch, iMac, i-OSX Leopard… uyaqala ukubona ukuthi kwenzekani?
IMicrosoft inemijikelezo emikhulu, ehamba kancane enokuphakama okungajulile futhi iphansi kakhulu. I-Apple nayo ibe nezinselelo zayo, kepha ngaphambi kokuthi i-Apple ibekwe icala noma ihlazeke isikhathi eside ngokwanele, baqala okusha. I-Apple ayithathi unyaka njengoba kwenza iMicrosoft, baveza amahemuhemu lapha noma laphaya bese beyethula. Futhi kuzwakala sengathi baqala masonto onke! Abantu baxolela ukushiyeka kwenguqulo yokuqala (izindleko nekhwalithi) futhi ngenjabulo badlulela enguqulweni yesithathu neyesine. Isikhathi sethu sokunaka sifushane futhi i-Apple isisebenzisa ngokunenzuzo.
Uvumela ini ukudlula kuwe? Misa ukulinda izinto zilunge ukuze ungene. Ngena namuhla noma ubuke ithuba elidlula kuwe. Ukuphela kwendlela wena noma ibhizinisi lakho elizophumelela ngayo.
Qaphela: Eminye imininingwane yami ku-Apple ikhuthazwe yilokhu okuthunyelwe okuhle empumelelweni ka-Apple e-Daring Fireball.
Tags: ukuqokwaisicelo sokuqokwaamakhadiamakhadi krisimasiubbei-google plus infographicIzibalo ze-google plusamakhadi eholideisikhathi seholideindianapolisujonathan salem baskinisheduli eku-inthanethiukuhlela onlineuhleloamabhukumaka omphakathiibha ephezulu
Onkulunkulu bezinkawu sebekhulumile futhi uScott Adams ubhala incwadi!
Amabhulogi akuzona izinkundla - Ukuzenza Ithuluzi Lokumaketha Elikhulu Lenkampani
I-Oct 25, i-2007 ku-3: i-05 PM
Inkampani A inendlela efanele. Isisho esithi “Kungcono ukuba ngu-80% namuhla namuhla kuno-100% khona kusasa” asikaze sibe yiqiniso kakhulu kunanamhlanje. Isivinini esanda njalo lapho izinto zenzeka khona ebhizinisini siyaqhubeka nokungimangaza.